Leyo mininingwane emincane ekususa empilweni enempilo | Bezzia
USusana Garcia | 04/05/2021 20:00 | Inhlalakahle, Ezempilo
Kwesinye isikhathi izinto ezincane zinemiphumela emikhulu futhi ubufakazi balokhu ukuthi ukuxuba ukushukuma okuncane kwansuku zonke kungaholela empilweni okungeyona leyo mpilo esifuna ukuyiphila. Imininingwane emincane yokuphila kwansuku zonke iyasiphunyuka kodwa kungathatha isinqumo maqondana nokuhola indlela yokuphila ezimisele noma ukuyiguqula ngokuphelele. Kubalulekile ukugcizelela hhayi kuphela ukuthinta okukhulu kepha nezincane kakhulu.
Un imininingwane emincane ephindaphindwa nsuku zonke iba yinto esisithintayo Okuningi kwe. Lokhu kwenzelwa yonke into futhi futhi kungaba yinto enhle ngoba ngoshintsho oluncane singafinyelela izinhloso ezinkulu. Ngakho-ke ake sithole ukuthi yimiphi leyo mininingwane emincane namuhla engakuvumeli ukuba uphile impilo enempilo.
1 Awuhleleli ukudla kwakho
2 Uyazivumela izinto eziningi
3 Ugxila kuphela ekunciphiseni isisindo
4 Wenza imidlalo ongayithandi
5 Vumela ukuzwa ushintsho
Awuhleleli ukudla kwakho
Lokhu kungazwakala kungajwayelekile kepha uma singakuhleleli ukudla kwethu kulula kakhulu ukuthi siwele esilingweni sokudla okuthile okungenampilo okucutshungulwa kakhulu noma okunamafutha noshukela. Kungakho ukuhlela okuhle kungakusiza kakhulu uma kukhulunywa ngokuqala impilo enempilo. Singazithokozisa kodwa kufanele babe nokugcina isikhathi, kuphela ngezinsuku ezikhethekile. Isikhathi esisele kumele sinamathele kokukodwa ukudla okunomsoco nokunempilo ukugwema ukufaka ukudla okulula noma izinto ezingenza ukudla kwethu kuyeke ukuba nempilo.
Uyazivumela izinto eziningi
Kuliqiniso ukuthi sihlale sinezinsuku ezithile lapho sifisa okuthile okumnandi noma kunzima ukungadli noma ukuphuza utshwala ngesikhathi sephathi. Kepha lezi zinhlobo zezinto ezenza ukuthi ekugcineni singakwazi ukuhola indlela yokuphila enempilo njengoba sifuna cishe ngaphandle kokukuqaphela, ngoba sithathwa yilezi zivumelo ezincane. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi sihlale siqaphela izinsuku lapho singakwazi ukukhokhela okuthile, ngaphandle kokweqisa. Hhayi kuphela impilo yethu nolayini wethu abazosibonga, kepha nenhlalakahle yethu yesisu. Uzobona ukuthi ukugayeka komzimba kusinda kangako nokuthi uzizwa ungcono futhi ungcono kanjani.
Ugxila kuphela ekunciphiseni isisindo
Lokhu akuyona indlela yokuphila enempilo, ngoba kunabantu abangahle babe nesisindo esiphakeme kodwa babe nempilo kanti abanye bazacile. Ngakho-ke cabanga ukuthi akukhona okokwehlisa isisindo ukuze ubukeke ungcono, kumayelana nokunakekela umzimba wakho ukuze uzizwe ungcono. Lapho sizinakekela thina sithuthukisa ukuzethemba kwethu kepha nempilo yethu, amasosha omzimba ngakho-ke sithuthukisa umzimba wethu wonke esikhathini esifushane nesikhathi eside. Kungumqondo wembulunga yonke wezempilo kude nalowo mqondo wemfashini ogxila esikalini kuphela.
Wenza imidlalo ongayithandi
Lokhu kuyiphutha, ngoba ngokuhamba kwesikhathi uzogcina ungadlali imidlalo. Wonke umuntu angathola umsebenzi olingana nowakhe indlela yokuphila nezinto ozithandayo. Lokhu kubalulekile ukuze iqhubeke ngokuhamba kwesikhathi. Kungakho kungafanele uguqule umsebenzi wakho kuphela bese uzama ukuthi mingaki okuheha ukunaka kwakho, kepha kufanele ubheke labo obathandayo ukuze babe yingxenye yempilo yakho.
Vumela ukuzwa ushintsho
Izinguquko azenzeki ngobusuku obubodwa yingakho kwesinye isikhathi sikuthola kunzima ukukufeza. Kubalulekile lalela umzimba wethu lapho senza ushintsho endleleni yethu yokuphila, ngoba uzositshela ukuthi senza kahle. Lokhu akwenzeki ngobusuku obubodwa, kepha inhlalakahle yomzimba nengqondo iza nempilo enempilo yingakho sizokuqaphela lapho sikuzwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Imininingwane emincane ekuvimbela ekubeni nempilo enempilo